“Somaliland, cidina ma aqoonsana Dekedda Berberina waa …………. ” iyo raaligelintiisa Puntland – Yuusuf Garaad |
“Somaliland, cidina ma aqoonsana Dekedda Berberina waa …………. ” iyo raaligelintiisa Puntland – Yuusuf Garaad
Yuusuf Garaad oo waligiiba lagu yaqaanay nacaybka iyo ka soo horjeedka gooni isku taaga Jamhuuriyadda Somaliland, kuna caan baxay wakhtigii uu joogay BBC-da Somaliga ayaa bar uu ku leeyahay interka wali ku qaybinaya nacaybkiisii hore loo bartay. Akhristo qoraalkiisa oo faahfaahsan.
“Waxaan daawaday hooyooyin iyo carruur Soomaaliyeed, oo ka soo qaxay dagaalka Yemen, oo dekdedda Bebera laga hortaagan yahay. Waxaa loo diiddan yahay in ay ka degaan markabkii ay saarnaayeen.
Somaliland kama harayo xataa haddii ay aqoonsi hesho. Waan tirsanayaa. Waxaan rabaa in ay ka mid noqoto dalalka iyo dadka Soomaaliyeed ee is shinsanaya”.
Waxa kale oo uu raaligelin siiyey reer Puntland akhri halkan:-
Saaxiibbayaal kala shakiga iyo is aamminid la’aantu waa tan meesha na dhigtay. Wax uu bloggeygu u dhimi karo Puntland ama aan rabo in aan ugu dhimo ma jiraan.”
Halkan ka eeg Yusuf Garaad Qoraaladisa